Nhau - Kugadziriswa kweiyo Stainless Simbi Pipe Kugadzira Machine
Nekuvandudzwa kwemaindasitiri, iko kushandiswa kwesimbi isina simbi-pombi yekugadzira muchina iri kuramba ichipararira, kunyangwe kugadziriswa kwemidziyo yega iri panzvimbo, kunokanganisa zvakananga mhando yekugadzirwa, pamwe nehupenyu hwebasa remidziyo. Kugadziriswa kwakanaka kunogona kunyange kugadzirisa kuchengetedzeka uye kugadzikana, kuve nechokwadi chekuti kugadzirwa kwemhando yepamusoro kupera. Asi kana iwe usiri kujairana nesimbi isina tsvina yekushongedza chubhu muchina, inogona kusakwanisa kutanga kugadzira kumusoro. Ipapo inotevera ichaunza basa rekuchengetedza pane isina simbi yekushongedza pombi yekudhiza muchina, ndinovimba inogona kukubatsira.
1. Iyo yemagetsi gadziriso yesimbi isina simbi pombi yekutengesa unit inotora frequency kutendeuka kumhanya mirau.
2. Iyo yakatenderera furemu inotenderera furemu, kutenderera kwayo kuburikidza ne turbo-worm bhokisi uye coupler, ichiita kuti iyo unit ive nyore kuita uye igadzikane kuumburuka.
3. Kugadzira muchina uye saizi inotyairwa nechero mota ine compact dhizaini. Kugadziriswa kuri nyore, uye kuri nyore kushandisa.
4. Yezve pombi yemafuta yekuisa yemukati yekumisikidza muchina, kunyangwe paine yemukati firita, vatengi vachiri kuda kuita nguva dzose basa rekuchenesa kuona kuti pombi yemafuta haizovharwe. Iyo nzira yemhepo yeiyo oxygen sensor inofanirawo kucheneswa nguva dzose kudzivirira mafuta akawandisa kubva pakuvhara uye pfupi pfupi.
5. Iyo yekumisikidza furemu inotora inotenderera inoenderana ina-yekubatanidza cantilever mbiri reel mashini, iyo inogona kukuvadzwa panguva yekushanda kweyuniti, iyo inogona kudzikisira nguva yekugadzirira uye kugonesa iyo unit kuti ibudiswe ichienderera ichienderera pasina kubhenda tsono.
6. Nzvimbo yakatwasuka inogona kugadziridzwa yakatwasuka kana yega pachigadziko, uye inogona zvakare kugadziriswa yakatwasuka.
7. Iyo yepakati peyakagadzika yetsiba yezvigayo zvekutanga zviviri zvekumonera uye iyo inotenderera pakati inogona kugadziridzwa, uye weld musono wakakwenenzverwa kubva kumativi ese enzira yakadzedzereka. Iyo yepakati yekupedzisira ndiyo yepakati yeiyo welder, uye iyo weld musono yakananga pasi pakona yemadhigirii makumi mapfumbamwe kusvika kune inotenderera nzvimbo yepakati, ichiita iyo yekupukuta mhedzisiro.
8. iyo yakatenderera furemu inzira mbiri-nzira kunze kweyekuongorora furemu bracket, apo iko kuda kutsiva iyo velvet, sunungura yekunze bracket inogadzirisa mabhaudhi, iko kuderera kweiyo furemu kune ese mativi zvichiteerana, inochinjika kugadzirisa.
Izvo zviri pamusoro ndezve iro basa rekuchengetedza rine chekuita nesimbi isina kuchena yekushongedza chubhu muchina, ndinovimba inogona kukubatsira.